Super Mario Run ikozvino yavapo paApp Store | IPhone nhau
Super Mario Run ikozvino yavapo paApp Store
Iko kumirira kwapera, uye mushure memwedzi yakati wandei takamirira unozivikanwa-wevhidhiyo mutambo hunhu munhoroondo kuti usvike pane yedu iPhone, Super Mario ikozvino iri muApp Store yakagadzirira kurodha pane yako iPhone nePad. Mushure mekuregererwa kwakawanda naNintendo pane nhare mbozha, iye pakupedzisira anosarudza kuvhura rimwe remazita ake epic kuridza pane iyo iPhone nePad, uye zvakare inozviita kutanga pamidziyo yeApple, ichisiya mafoni eApple yechipiri wave ichauya muna2017, isina zuva chairo. Iwe unoda kutora imwe yemitambo yakanyanya kutarisirwa yegore? Zvakanaka, pazasi tinokupa iyo link uye neruzivo rwese rwaungangoda.
Super Mario Run inochengeta zvese zvakakosha zvemitambo yekutanga, iine magirafu akanyatsoenderana neRetina skrini yeApple zvishandiso, uye nehurongwa hwekutonga hunoenderana nekubata zvidzitiro, chimwe chinhu icho mamwe emavhidhiyo emitambo echinyakare asina. . Super Mario Run iri «risingaperi mumhanyi» umo Mario haamiri kumhanya pachiratidziri uye neruoko rumwe chete iwe unogona kudzora kusvetuka kwake kuti usvike kune mamwe mapuratifomu, uwane mari uye mamwe magetsi, uye nekudaro usvike kumagumo edanho rega rega usingatendeuke kune "chaiwo masimba" ayo anopa mhedzisiro dzakadai pane izvi skrini.
Kunge chero chigadzirwa chinogadzira tarisiro yakawanda, gakava rave risipo, uye Super Mario kumhanya kwakashoropodzwa pamutengo wayo, kubvira Kunyangwe iri yemahara kumatanga ekutanga, iwe unofanirwa kubhadhara € 9,99 mune imwechete yakasanganiswa kutenga kuvhura zvese zvirimo mumutambo. Uye zvakare, kuda kuenderera kweinternet kubatanidza kutamba hakuna kugamuchirwa zvakanaka nevashandisi vazhinji vanozvidemba nekusakwanisa kuinakidza mundege kana paIpad pasina 3G kana WiFi kubatana. Kunyangwe zvese, kubudirira kunopfuura kuvimbiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Super Mario Run ikozvino yavapo paApp Store
Ndakaitora pasi asi iyo app haivhure nekuti ini ndine jailbreak xD chero mhinduro? (zvimwe kunze kwekurasa jailbreak xD)
nekuti ios 9 haivhure, kana nejereakbreak kana isina iyo
Pindura kuna junno
Ini ndinoramba ndichiwana kuti ivo vachandizivisa kana kurodha pasi kuripo…. uye kusvika parizvino hapana !!!
Zviri normal ??
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri, hachivhure, chinosvetuka. kungave kuri nekuda kwejere ?????? Handifunge kuti noooo
Ndakatowana mhinduro yejeri ... zvinotoshanda kwandiri.
Iwe unofanirwa kutora TSPROTECTOR 8+ kubva kuecydia, iwe unoisa iyo mario app pane yakasviba, uye yakagadzirira kuenda, zvinoshamisa hehehe
Uyu mutambo unogona kugoverwa semhuri neakagovaniswa Applemusic account?
Haizovhura pane ios 10.1.1 pane iPad Air 2 isina jailbreak
Pindura kuna Alejokof
ooo hongu murume zvakashanda ndatenda
Ndakaitora pasi uye chokwadi ndechekuti ini handioni kuti mutambo kubhadhara € 9,99 yazvo, iri yakananga uye ndinoiisa mushure mechikamu uye ndadzima, iwe unongosvetuka zvakasara zviri otomatiki
Dhaunirodha uye dzadzimwa… Ini ndaitarisira zvimwe kubva kuna Mario naNintendo asi ini ndakaguma ndanyadziswa neshanduro yemahara yemutambo.
Ini ndichangobva kurodha pasi mutambo uye unonakidza kwazvo. Ndiri kufunga kubhadhara madhora gumi kuti ndivhure zvese, mubvunzo ndewunotevera, kana ndikabhadhara kuti ndivhure, ndingaitewo here mutambo nemusikana wangu iye asingabhadhari? Kunyangwe ini ndikachiisa neangu AppleID kana imwe nzira. Ndatenda.
Kune avo vasingashande mutambo pane zvishandiso neJailBreak, semumwe munhu ataurwa pamusoro, gadza iyo tsProtector +8 kubva kuCydia uye isa mutambo pane yakasviba runyorwa uye ichashanda.
Haivhure iOS 10.0.1 iPhone 6s Uyezve
Pebble inozivisa kuti mawachi anowanikwa acharamba achishanda